Vikaria Episkopaly Manodidina (VEM) – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vikaria Episkopaly Manodidina (VEM)
SABOTSY 27 FEBROARY 2016
Fifampiarahabana tratry ny taona Vikaria Episkôpaly Manodidina (VEM)
Fifidianana Filoha mpitantana & Birao VEM ilany Atsinanana
Natao teny Anjomakely Ambohipiadanana ny fotoana, natomboka tamin’ny Lamesa niarahan’ireo Pretra 12 mirahalahy ao amin’ireo distrika mandrafitra ny tapany atsinanana amin’ny VEM.
[Best_Wordpress_Gallery id= »1″ gal_title= »VEM-1″]
Natolotra tamin’ny fomba ofisialy ny fametraham-pialàn’ireo birao niandraikitra ny VEM teo aloha rehefa avy nankatoavin’ny Vikera episkôpaly. Narahina tamin’ny fanolorana ireo kandidà hofidiana handrafitra ny birao vaovao.
Avy eo niroso tamin’ny fifidianana ireo filohan’ny FIlan-kevitra Pastoraly avy amin’ny Paroasy maro – marihina entoana fa natao araka ny voalaza ny sata mifehy ny VEM ny raharaha rehetra.
Tontosa soa aman-tsara ny fifidianana ka nahafahana namoaka ireo Filoha vaovao telo mianadahy.
Niroso tamin’ny fiaraha-misakafo ny rehetra, ary mandritra izany dia nampiseho talenta amin’ny alalan’ny dihy maro samihafa ireo ankizy taizana sy beazina eo anivon’ny Orphelinat-ndry Masera eny Ambohipiadanana.
[Best_Wordpress_Gallery id= »2″ gal_title= »VEM-2″]
Ny ankizy :
Ny salantsalany :
Ary ny lehibe :
Iretsy birao vaovao kosa dia efa niketrika sahady ireo mpiara-miasa aminy: mpitam-bola sy mpanolo-tsaina.
Nofaranana tamin’ny fampisehoana ireo tompon’andraikitra rehetra mandrafitra ny birao vaovaon’ny VEM ilany Antsinana ny lanonana, narahan’ny Lehiben’ny Pretra (mikatroka eny Ambohijanaka) teny fampaherezana.
Chant de la création :
Fihatahana masina ho an’ny tanora